अझै हाँस्न पुगेन भन्ने गुनासो छ - कुराकानी - साप्ताहिक
स्टेज तथा टेलिभिजन कार्यक्रमदेखि चलचित्रको पर्दासम्म उक्तिकै सत्रिय र लोकप्रिय कलाकार हुन्– जितु नेपाल। सांस्कृतिक कार्यक्रमका त्रममा स्वदेशदेखि विदेशसम्म पुग्न भ्याइरहने यी अभिनेता पछिल्लो पटक नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण झैरहेको रमाइलो कार्यक्रम ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ का कारण चर्चामा छन् । कार्यत्रमले अघिल्लो साता प्रसारणको २५ औं भाग पूरा गरिसक्दा यसले दर्शकमाझ बेग्लै पहिचान बनाउँदै गएको छ । दीपकराज गिरीसँग चलचित्र छ माया छपक्कैको स्क्रिप्ट लेखनमा समेत सक्रिय जितु जेठको पहिलो सातादेखि यही चलचिक्रको छायांकनमा सत्रिय हुँदैछन् । जितुसँग साप्ताहिकको फटाफट :
मुन्द्रेको कमेडी क्लबको सफलतालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
यो कार्यक्रम सफल बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्ति दर्शकहरू नै हुनुहुन्छ । सर्वप्रथम म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसको सफलतालाई हामी करिब २५ जनाको टिमको सामूहिक सफलताका रूपमा पनि लिएको छु ।
यो कार्यक्रम प्रारम्भिक चरणमा यत्तिको सफल होला भन्ने लागेको थियो ?
नढाँटी भन्नु पर्दा मैले एक प्रकारको रिक्स नै मोलेको हुँ । नयाँ स्वादको कार्यक्रमलाई दर्शकले कसरी लिनु होला भन्ने चुनौती थियो । २५ भागसम्म पुग्दा दर्शकले जुन प्रकारको साथ र माया दिनुभएको छ, त्यसले हामीलाई थप उत्साहित बनाएको छ ।
कतिपयले यसलाई विदेशी कार्यक्रमको नक्कल पनि भन्दैछन् नि ?
नक्कलभन्दा पनि प्रभावित भएको भन्ने प्रतिक्रिया सुनिरहेका छौं । हामी त सीमित स्रोत र साधनमा विदेशी टेलिभिजन जत्तिकै गुणस्तरको नेपाली कार्यक्रम तयार पार्न सफल भएकोमा खुसी पो मानिरहेका छौं ।
कति एपिसोडपछि यो कार्यक्रम लोकप्रिय हुन थालेको महसुस हुन थाल्यो ?
कार्यक्रमका अघिल्ला दुई श्रृंखला सामान्य थिए । तेस्रो तथा चौथो भागसम्म आइपुग्दा दर्शकले यो कार्यक्रमप्रति रुचि देखाउन थाल्नुभयो । मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडालाई प्रस्तुत गरेको एपिसोडपछि भने यसले वास्तवमै लोकप्रियता हासिल गरेको अनुभव गर्‍यौं ।
लोकप्रियताको मापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
अहिले त सजिलो छ नि । युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर एकमा आएपछि लोकप्रिय भएकै मानिन्छ । त्यसबाहेक दर्शकहरूले दिने प्रतिक्रियाका आधारमा पनि हामी सफल भैरहेका छौं जस्तो लाग्छ ।
दर्शकका गुनासा पनि आउँछन् कि ?
गुनासा त कति आउँछन् कति । अझै हँसाउन पुगेन भन्ने गुनासा बढी आउँछन् । दर्शकको गुनासोप्रति ध्यान दिँदै हामीले सकेसम्म हँसाउने फ्रयास गरिरहेका हुन्छौं ।
कार्यक्रमको तयारीका त्रममा समस्या चाहिँ के–कस्ता आइरहेका छन् ?
हामीलाई सबैभन्दा समस्या त छायांकनस्थलको नै छ । अहिले हामी पर्यटन बोर्डको सभा भवनमा सेट लगाएर छायांकन गरिरहेका छौं तर त्यहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना भैरहने हुनाले हामीलाई स्थायी स्टुडियाको अभाव महसुस भैरहेको छ ।
अबको योजना के छ ?
कार्यक्रमलाई ५२ भागसम्म पुर्‍याएर केही समय विश्राम लिने कि भन्ने सोच छ । त्यसबाहेक सामाजिक क्षेत्रका व्यत्तित्वहरूलाई पनि निम्त्याउने योजना छ । दोस्रो सिजनका लागि भने एउटा विशेष स्टुडियो तथा सेट बनाएर छायांकन गराउने योजना बनाउँदैछौं ।
कार्यक्रमको सबैभन्दा झन्झटिलो पक्ष के लाग्छ ?
सबैभन्दा समस्याचाहिँ कार्यक्रममा सहभागी हुने अतिथिको छनौट नै रहेछ । त्यसबाहेक छायांकनस्थलको अभावमा हामीले एकै दिन दुई–तीनवटा एपिसोड छायांकन गरिरहनु परेको छ ।
अभिनय र कमेडी क्लबको प्रस्तुतिमा कुन सहज ?
सहज त दुवै होइनन् तर म दुवै काममा उत्तिकै रमाएको छु ।
चलचित्र छ माया छपक्कैमा कस्तो भूमिकामा प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ ?
सह–निर्माताका रूपमा समेत सहभागी भएको यो चलचित्रमा म हिरो (दीपकराज गिरी)को साथीको भूमिका निर्वाह गर्दैछु ।
केश हेरेर डिल गर्छु भाद्र ३, २०७६
नजान्ने मानिसहरूसँग मात्र बोल्छु भाद्र ३, २०७६
स्वीकार गर्दै डेटमा जान्थे भाद्र २, २०७६
राम्रो अनुहारकी अभिनेत्री देखेकै छैन भाद्र २, २०७६
वानपिसचाहिँ लगाउँथे भाद्र २, २०७६
हङकङमा स्थानिय प्रतिभा उपेक्षित छन् भाद्र १, २०७६
दोहोरी साँझ संगीत विद्यालय श्रावण २७, २०७६
पूर्वीय र पाश्चात्य संगीत सिक्नुपर्छ श्रावण १९, २०७६
अब पुराना गीतले न्याय पाउनेछन् श्रावण १३, २०७६
तीज गीत पुरुषले गाएको मन पर्दैन श्रावण ११, २०७६